Saxaafada Spain Oo Dabka Ku Sii Shidaysa Xaalada Mustaqbalka Neymar JR Iyo Aabaha Dhalay Neymar Oo La Sheegay In Uu La Kulmayo Nasser Al-Khelaïfi. - Laacib.net
Saxaafada Spain Oo Dabka Ku Sii Shidaysa Xaalada Mustaqbalka Neymar JR Iyo Aabaha Dhalay Neymar Oo La Sheegay In Uu La Kulmayo Nasser Al-Khelaïfi.
Saxaafada dalka Spain ayaa maanta si wayn dabka ugu sii shidaysa xaalada Neymar JR iyo mustaqbalkiisa markale mugdiga la galinayo waxaana jira warar dheeraad ah oo ka soo baxay kuwaas oo muujinaya in dadka doonaya in Neymar JR uu Barcelona ka baxo ay saamayn wayn yeelanayaan. Dhawaan ayay ahayd markii uu wakiilkii Neymar JR uu sheegay in uu doonayay in Neymar uu Real Madrid ku biiro balse Barcelona ay noqotay doorashada xidigan.
Laakiin wargaysyada Spain ugu waa wayn ee AS, Marca iyo Sport ayaa maanta si wayn wax uga qoraya in Neymar JR aanu ku faraxsanayn sii joogista Barcelona, laakiin wargayska Madrid ka soo baxa ee AS ayaaba hadda qoraya in aabaha dhalay Neymar JR uu todobaadkan u safri doono magaalada Paris ee dalka France si uu kulan ula soo qaato madax waynaha PSG ee Nasser Al-Khelaïfi.
Wuxuuna wargayska AS sheegay in xiisaha Barcelona ee Marco Verratti uu fure u noqon karo in Neymar JR uu PSG ku biiro. Inkasta oo uu agaasimaha ciyaaraha Barcelona ee Robert Fernandez uu sheegay in Neymar JR aanu kooxdiisa ka bixi doonin isla markaana aanu wax dalab ahi u oolin miiska ayay haddana warbaahinta Spain muujinaysaa in hubtani la’aan uu galayo mustaqbalka Neymar JR.
Madax waynaha kooxda PSG ee Nasser Al-Khelaïfi ayaa dhawaan diiday in uu miiska wada xaajood la soo fadhiisto Barcelona markii ay doonayeen in ay kala hadlaan iibka Marco Verratti, laakiin dadka doonaya in Neymar JR uu ka baxo Barcelona ayaa aaminsan in xiisaha wayn ee Barcelona ay u qabto Marco Verratti uu keeni karo in Neymar ay kaga saaraan Camp Nou.
Wargayska Sport ee Barcelona ka soo baxa ayaa isna qoray in Neymar JR loo sheegay in haddii uu Barcelona sii joogo uu markasta kan labaad u ahaan doono Lionel Messi iyada oo waxa kaliya ee aanu ku guulaysan uu yahay Ballon d’Orka sida lagu xusay warbixinta Sport.
Lacagta heshiiska Neymar JR lagu burburin karo ayaa ah 222 milyan euros laakiin lacagtan ayaa xili ciyaareed kadib gaadhi doonta 250 milyan oo euros. Marco Verratti ayaa lagu qiimaynayaa 100 milyan oo eruos, laakiin wargayska AS ayaa sheegay in haddii lacagta Neymar ay tahay 222 milyan oo euros oo ay Verratti ku helaan 100 milyan oo euros in ay faa’iido wayn oo dhaqaale ah ka heli karto iibka xidiga ree Brazil.
Ugu danbayn wargayska AS ayaa sheegay in Neymar JR ayna gabi ahaanba dhiiro galin lacagtu wuxuuna xidiga ree Brazil aaminsan yahay in uu wax badan ka bartay ciyaartoyda ay isku kooxda yihiin iyo Lionel Messi isla markaana hadda la soo gaadhay waqtigii uu Messi mid noqon lahaa halkii uu kan labaad u noqon lahaa ayaa warbixinta AS la sii raaciyay.